म्याग्दीमा यस्तो भेटियो अनौठो गुफा !
म्याग्दी । मंगला गाउँपालिका–१ खानीगाउँमा अचम्मको गुफा फेला परेको छ । बीस मिटर लामो सो गुफामा जनावर, पक्षी, हातहतियार, हिमशृंखला, पहाड, तालतलैया, देवीदेवताका मूर्ति, घरलगायत आकृति रहेका स्थानीयवासीले ब...
गर्भमा शिशुको वृद्धि र बिकास कसरी हुन्छ ? हेर्नुहोस् यो भिडियो
काठमाडौं । केही अपवादबाहेक हामी नौ महिना आमाको गर्भमा हुर्कन्छौ । ४० हप्ता अर्थात मोटामोटी २८० दिनमा जन्मिनु भन्दा पहिले शिशुको बृद्धि एवं बिकास अनौठो तरिकाले हुने गर्दछ । सबैलाई कौतुहलता हुनु स्वभाव...
बिहे पछि एउटा नयाँ जीवन सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ...
जसका कारण बिहेनै नगरि बस्छन् पुरुषहरु !
जापानमा हरेक ५ जनामा एकजना पुरुष ५० बर्षसम्म पनि बिहे नगरि बसेको एक सर्बेक्षणले देखाएको छ । यसको मुख्य कारण श्रीमतीको बिकल्पमा सेक्स डलको प्रयोग भएको बताईएको छ । पछिल्लो समय जापानमा डच वाइफ नामक सेक्स...
राशी अनुसार फरक हुन्छ यौन चाहना, यस्तो भन्छ ज्योतिषशास्त्र
काठमाडौं । हरेक मानिसको स्वभाव र रुची फरक फरक हुन्छ । मानिसले आफ्नो रुची अनुसार व्यवहार पनि भिन्न खालको देखाइरहेको हुन्छ । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कुनै व्यक्ति गुलियोको पारखी हुन्छन् भन...
२४ वर्षिय युवतीको यस्तो खुलासा, ‘दिनमै ३० जनाले बलात्कार गर्थे’
एजेन्सी । २०१५ मा मानव तस्करहरुसँग फसेकी यी २४ बर्षीय युवतीले संसारलाई नै अचम्मित बनाउने घटनाको खुलाशा गरेकी थिइन् । मेक्सिकोकी कार्ला जैसिन्टोका अनुसार, उनलाई ४ बर्षमा ४३ हजार पटक बलात्कार भएको थियो ...
दुईवटा बिहे नगर्ने पुरुषलाई जेल सजाय
एजेन्सी । हाम्रो देशमा बहुविवाह कानूनतः प्रतिबन्धित छ र एकभन्दा धेरै श्रीमती बनाउने पुरुषलाई सजाय हुन्छ । तर अफ्रिकी देश इरिट्रियामा चाहिँ हाम्रोमा भन्दा ठ्याक्कै उल्टो कानून रहेछ । उक्त देशमा हरेक प...
नागमणी के हो ? किन करोडौं पैसामा बिक्छ ?
एजेन्सी। सर्प यस्तो जीव हो जुन मानिसको लागि सदियौं देखि चासोको केन्द्र बन्दै आएको छ। सर्पको बारेमा अहिलेसम्म हजारौं खोज अनि अनुसन्धान भइसकेको छ तर पनि अझै यो जीवको सबै रहस्य खुलिसकेको छैन। पौराणिककाल ...
बलात्कार भएकी पीडित महिलाका कपडाको प्रदर्शनी !
महिलाहरुमाथि हुने बलात्कार तथा अन्य खाले यौनहिंसामा उनीहरुले लगाउने भडि्कला पहिरनको पनि भूमिका रहने गरेको कतिपयको भनाई रहने गरेको छ । सायद यहीँ मान्यतालाई तोड्नका लागि बेल्जियममा एक अनौठो प्रदर्शनीको ...
यी १२ चलचित्रहरु जसमा कलाकारहरुले साँच्चै सेक्स गरे
हामीले हेर्ने धेरै मुलधारका चलचित्रमा देखाइने सेक्स सिन झुठा हुन्छन् । तर, विश्व चलचित्र क्षेत्रमा केही यस्ता चलचित्र पनि छन्, जुन चलचित्रमा कलाकारहरुले स्क्रीनकै लागि भनेर साँच्चै सेक्स गरेका छन् । क...
चिनियाँ बच्चा पछाडि प्वाल परेको पाइन्ट किन लगाउँछन् ? यस्तो छ कारण
यदि तपाईले बालबालिकाले बाटो, पार्क, सपिङ्ग मल जस्ता सार्वजनिक स्थानका मा खुलेआम उठेर दिसा पिसाप गरिरहेको देख्नु भयो भने के सोच्नु हुन्छ ? तर यो चीनमा भने सामान्य कुरा हो । बालबालिकालाई हिडडुल गर्न कु...
हवाई जहाजको रङ किन सेतो हुन्छ ? यस्तो छ तथ्य
हामीमध्ये कतिले हवाई जहाजमा यात्रा गरेका छौं । तर हवाई जहाज (विमान) सँग जोडिएका केही तथ्य यस्ता पनि छन् जसबारे सायद तपाईंलाई थाहा छैन । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔंः किन हुन्छ हवाई जहाजको रङ सेतो ? ...
ताइवानमा एक हैरान लाग्ने घटना सार्वजनिक भएको छ । एकजना व्यक्तिलाई यस्तो हालतमा अस्पतालमा ल्याइयो कि जसलाई देख्दैमा सबै अचम्ममा परे । तर, वास्तवमा ती मानिसमाथि जुन बज्रपात भएर अस्पताल ल्याइएको थियो , त...
भुलेर पनि खानु हुन्न यी चीज, जसले तपाईको यौन जीवनमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ !
यौन मानिसको लागी अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता हो । यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागी हामीले निकै ध्यान दिनुपर्दछ । तपाईको गलत भोजनले पनि यौन जीवनलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ । भोजन हाम्रो शरीरको लागि निकै आवश...
अबैध सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएपछि बिवाह गर्न दबाव दिएको भन्दै होटलमा लगेर महिलाको हत्या
सिरहा । एक महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा लहान ८ का २५ वर्षीय अमितकुमार साह पक्राउ परेका छन् । मिर्चैया बजारकी अंकिता यादवको हत्या गरेको अभियोगमा हरिवनबाट पक्राउ गरिएका साहलाई २१ दिनपछि इलाका प्रहरी कार...
महिलाले कसरी लिन्छन् चरम सन्तुष्टि (सेक्स सम्बन्धी अनौठा तथ्य)
महिलाको र पुरुषका आ आफ्नै रुची हुन्छन । त्यसमा पनी पुरुषका भन्दा अझ धेरै थरी रुची महिलामा हुने गर्छन । बिभिन्न खोज बाट यहि तथ्य बाहिर आयको छ । हामीले पहिलाका स्तम्भहरुमा पनि सेक्स सम्बन्धी बिभिन्न रोच...
वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् । आमरुपमा सेक्सबाट यति सुख मिल्छ कि शरीर र मनको थकान मे...
संभोगबाट महिलाहरुलाई हुन्छन् यस्ता फाईदा
बिहिबार, कार्तिक ९, २०७४
संभोग कृयाको गिन्ती सबभन्दा उपयुक्त व्यायामहरुमा समेत गरिन्छ । संभोगले केवल शारीरिक र भावनात्मक लाभ मात्र दिँदैन यसले महिलाहरुको शारीरिक संरचनामा पनि परिवर्तन आउँछ । संभोगले महिलाहरुलाई धेरै किसिमको र...
संसारमा बिचित्र-बिचित्रको कानुनहरु बनेका छन् । कानुन बनाउनुपर्ने आधारहरु पनि छन् । यसैबीच नेपालमा श्रीमती कुट्नु अपराध हो भने उनको चाहना बिपरित यौन सम्पर्क गर्नु बलात्कार हो भन्ने सम्मको कानुन छ तर अम...
काठमाडौं । यौन सम्पर्कका बेला महिलाले चरम सुखको अनुभव गर्न सक्दैनन् भन्ने सुनेको छु । पुरुषको जस्तो वीर्य स्खलन हुने चरणमा महिला पुग्दैनन् भन्ने पनि पढेको छु । तर, म यौन सम्पर्कका बेला योनीबाट केही आए...